Abụ m onye ọrụ mbadamba ụrọ… Enwere m iPad na iPad Obere ma e wezụga MacBook Pro na iPhone m. N'ụzọ na-akpali mmasị, ana m eji ngwaọrụ ọ bụla akọwapụtara nke ọma. My iPad Obere, dịka ọmụmaatụ, bụ mbadamba zuru oke maka iweta nzukọ na njem azụmahịa ebe enwere ọtụtụ ịgagharị na achọghị m ịdọrọ na laptọọpụ m na eriri niile dị mkpa, chaja na ngwa. IPad m na-anọkarị n'akụkụ akwa m nke telivishọn maka ịzụ na ịgụ ihe. O buru oke ibu maka azụmaahịa mana ọ karịrị akarị n'ụlọ.
Mbadamba na laptọọpụ emebiwo ahịa desktọọpụ. Na 2013, ahịa desktọọpụ PC kwụsịrị 98%! Emechara m ngwa-ụlọ m ọrụ ụlọ ọrụ na desktọọpụ lara ezumike nká n'ọnọdụ nke a laptọọpụ guzoro na a Ihe ngosi Thunderbolt. Na arụpụtaghị m n'ụlọ arịgoro ebe ọ bụ na m na-ebu laptọọpụ m n'etiti ọfịs na achọghị m ichegbu onwe m maka ịtinye na chaja, ịnyefe faịlụ, wdg.
Ijide n'aka na saịtị gị na-anabata ojiji nke mbadamba - yana iji ohere nke ịme ihe nchọgharị ma ọ bụ mmepe ngwa - nwere ike ịnye ọganihu dị ukwuu na onye ahịa gị na njikọ ndị ọbịa yana ntụgharị. Nke bụ eziokwu bụ na ndị na-arụ ọrụ mbadamba nwere ihe omume a kapịrị ọnụ, dị ka ịgụ na ịzụ ahịa, na ha hụrụ n'anya iji mbadamba nkume ha maka ihe ngosi mkpanaka ha, laptọọpụ ma ọ bụ desktọọpụ. Kedụ ahụmahụ dịịrị ndị na - agụ akwụkwọ gị?